အဖွဲ့အစည်းများအတွက် Google AdWords သင်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများအားလုံး!
clever ads Google ဖြင့် log
အခမဲ့အွန်လိုင်းကြော်ငြာ tools များ
Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုမျက်တောင်ခတ်ပြီးဖန်တီးပါ။
Google Ads အတွက်မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာပါ။
သင်၏ Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ Display စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်နဖူးစည်း ads
သင်၏ Google Ads ကိုမည်သည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆိုအလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ဆိုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုမိုကုဒ်ကိုအသုံးပြုပြီးအခမဲ့ Google Ads credit ကိုရယူပါ။
Microsoft Teams ပေါင်းစည်းမှု
Microsoft Teams တွင်သင်၏ PPC ads စွမ်းဆောင်မှုကိုရယူပါ။
Clever Ads မန်နေဂျာ
သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာမှသင်၏ ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုကြည့်၊ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ေူပာင်းလဲရေးကို Pack ကို
ခြစ်ရာကနေသင့်ရဲ့ website မှာ ဖန်တီး. အခမဲ့ကြော်ငြာကိုစတင်ပါ။
Slack ပေါ်တွင်သင်၏ PPC ads စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလက်ခံရရှိပါ။
သင်၏ PPC ကြော်ငြာအချက်အလက်များကို Google Sheets သို့ယူဆောင်လာပါ။
Google က Chat ကိုအောက်ခြေ
Google Chat တွင်သင်၏ PPC ads
အဆိုပါကြော်ငြာအေဂျင်စီအဘို့အ tools တွေကိုမဖြစ်မနေ-ရှိသည်။
Google ဖြင့် log
Google AdWords for Agencies - သင်၏ ဖောက်သည်များ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားသည်
ဤ Google Ads for Agencies ကိရိယာများဖြင့် သင့်အချိန်ကိုချွေတာရာသင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောသင်၏ဖောက်သည်များကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အဖွဲ့-အာရုံစိုက် apps တွေအတွက်အကောင်းဆုံး features တွေ
သင့် client '' ကမ်ပိန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူစစ်မှန်သောအချိန်အတွက်အသိပေးချက်များကိုများနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုရယူပါ။
Google AdWords for Agencies ကိရိယာနှင့်မည်သည့်အရာကအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုတာကိုအသိပေးပါ
အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများမည်သည့်အချိန်တွင်ဆင်းလာသည်သို့မဟုတ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်သည်ကိုသိရန် notifications များကိုတည်ဆောက်ပြီးကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။
Slack ရန်ထည့်ပါ အသင်းများပေါင်းထည့်ရန် Google Chat သို့ထည့်ပါ
မက်ထရစ်နှင့်သင့်ဖောက်သည်များ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တိုးတက်မှုကိုလှပစွာပြသသည့်နက်ရှိုင်းသော monthly reports
Google Sheets ပေါ်တွင်ကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါ
သင့်ဖောက်သည်များ၏မက်ထရစ်ကိုကိုယ်တိုင်စုဆောင်းခြင်းအတွက်အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်။ အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြင့် add them toaGoogle Sheet.
ဒေါင်းလုပ် Google ကစာရွက်အတွက် add-on
သင့် client '' ကမ်ပိန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး အချက်အလက် Google Sheets တွင်စုစည်းပါ၊ လိုအပ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်သတိပေးချက်များကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ နှင့်သင်၏ client များထံပေးပို့နိုင်သောလစဉ် Smart Report များကိုရယူပါ။
ဒေါင်းလုပ် Google ကစာရွက်အတွက် add-on Slack ရန်ထည့်ပါ အသင်းများပေါင်းထည့်ရန် Google Chat သို့ထည့်ပါ
Agencies Tools များအတွက် Google AdWords အကြောင်းပိုမို
Google AdWords အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများနှင့်သင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းရန်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများသည် Google AdWords နည်းဗျူဟာကိုတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး Clever Ads အဖွဲ့ကသင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များ၏အချိန်နှင့်နေရာတိုင်းတွင်၊ သင်အလိုရှိသည့်နေရာမှအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရန် ။
သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်၊ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်သင်၏ Google chat တွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်လိုပါသလား။ ဤအရာအားလုံးနှင့်အခြားအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးပေးနိုင်ရန်သင့်ဖောက်သည်များ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုပြောပြရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
AdWords တွင်အေဂျင်စီများ၏ပေါင်းစည်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံး AdWords ရှိကြောင်း၊ ပိုမိုရှာဖွေရန်အာမခံပါသည်။
Google Ads အေဂျင်စီများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုငွေ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အရေးအကြီးဆုံးအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည် .... အချိန်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ Slack ၊ Microsoft Teams ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Google Chat bot ၊ ဂူဂဲလ် Spre ads Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖန်တီးခြင်း၊ အချိူးနှင့်တင်ခြင်းတို့ဖြင့်သင်၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုသင်၏ဖောက်သည်များ၊ သင်ကြိုက်သည့်ထိုနံနက်ခင်းကော်ဖီကိုသောက်ရန်အချိန်ကျန်သေးသည်!
အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ၊ အကောင်းဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများကိုပြုလုပ်ပါ။ မလိုအပ်သောအာရုံပျံ့လွင့်စရာများကိုရှောင်ရှားရန်၊ လစဉ်အစီရင်ခံစာများကိုရရှိရန်အရေးအကြီးဆုံးသောအသိပေးချက်များကိုသာရယူပါ။ အတိုချုပ်အားဖြင့် AdWords များအတွက်အေဂျင်စီများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ကိရိယာများသည်သင့်အားအမှန်တကယ်အရေးကြီးသည့်အရာများကိုအာရုံစိုက်ရန်အချိန်ကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ tools များနှင့်အတူအဘယျသို့ပွုနိုငျ
ဿုံသင့် client '' စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့မက်ထရစ်နဲ့တိုးတကျမှုပြသသော PDF ကို format နဲ့အသေးစိတ်လစဉ်အစီရင်ခံစာများ။ သငျသညျအမြားဆုံးအရေးပါအရာပေါ်အသေးစိတ်ဆုံးရှုံးမပါဘဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းနှင့်အသိပေး, ဒေတာ-မောင်းနှင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်အောင်အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်အရာကိုသင်သာလျှင်ကိစ္စရပ်များနှင့်တိုင်းတာသောဒေတာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
ပြောင်းလဲခြင်း Funnel, သော့ချက်စာလုံးများ ... စိတ်ကြိုက်အစီရင်ခံစာများတွင်သင်သိချင်သမျှ။ သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်သုံးစွဲသူများ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုအဆင်သင့်အသုံးပြုရန်အကြံပေးချက်များနှင့်အေဂျင်စီများ Google Adwords
အဖွဲ့-based apps တွေအတွက်အကောင်းဆုံး features တွေ
သင်၏ဖောက်သည်များ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီအသိပေးချက်များနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိပါ။ AdWords အကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အသိပေးချက်များနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိရန်အားသာချက်ယူလိုသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ မင်းရဲ့အေဂျင်စီထဲမှာမင်းဘာတွေသုံးတာလဲ။ ငါတို့၏ကိရိယာဖြင့်သင်၏ Google Ads အကောင့်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအဖွဲ့စကားပြောကိရိယာသုံးခုဖြစ်သော Slack ၊ Microsoft Teams သို့မဟုတ် Google Chat နှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ သင့်ဖောက်သည်များ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဒေတာနှင့် ရွေးချယ်၍ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်သင့်ဖောက်သည်များ၏အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုသိရှိရန်သင်၏သတိပေးချက်များကိုပြုပြင်ပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများကျဆင်းနေချိန်သို့မဟုတ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအသုံးစရိတ်များတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အသိပေးချက်များထဲမှတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောဆက်သွယ်ရေးလျှောက်လွှာတွင်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးလိမ့်မည်။ ( Slack , Microsoft Teams (သို့) Google Chat ) ။
ဤနည်း, သင်လက်ခံရရှိရန်လိုသည့်သတင်းအချက်အလက်များ, သင်ဦးစားပေးလိုသည့် parameters တွေကိုညွှန်ပြရန်နှင့်အရာဖြစ်ရပ်များသူတို့အားအလွန်အရေးပါအချိန်လေး / အချက်အလက်များ၏သတိထားပါနိုင်ရန်အတွက်ထူးဆန်းတဲ့နှငျ့သငျဖို့ညွှန်ပြခံရဖို့လိုအပ်နေအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်တဖွစျလိမျ့မညျ ။
ဒါကြောင့်ဘာမှသတိမပြုမိဘဲနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်အမြဲတမ်းထိပ်ဆုံးမှာရှိသည်။ Google Ads ကဘယ်တော့မှမလွယ်ကူဘူး။
သင်၏ဖောက်သည်များထံမှမက်ထရစ်များနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအချက်အလက်များကိုကိုယ်တိုင်စုဆောင်းသည့်နောက်တစ်စက္ကန့်ကိုမဖြုန်းပါနှင့်။ သူတို့ကိုဂူဂဲလ်စာရွက်ထဲကိုအလွယ်တကူမြန်မြန်ထည့်ပါ။ Google Ads ကိုဂူဂဲလ်မှပေးသောကိရိယာများနှင့်သင်၏အေဂျင်စီတွင်သင်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သောအခြားလူသိများသောအက်ပ်များမှအသုံးပြုသည်။
Google Sheets သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အဖွဲ့များကိုစုစည်းရန်အသုံးအများဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနေပါကသင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီးသင်၏ Drive တွင်သင်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာလွယ်ကူမဖြစ်နိုင်!
အေဂျင်စီများအတွက် Google AdWords ကိရိယာများကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုရတာလဲ။
Clever Ads တွင် Premier Google Partners အစီအစဉ်၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်၊ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ် ၁၀၀% လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂလိကဒေတာနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များကိုလေးစားမည်ဟုကတိပေးပါသည်။ 150,000 ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်ငါတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့၏ Google Ads မဟာဗျူဟာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့သည်။ သင်ကနောင်တမရပါ၊ အေဂျင်စီများအတွက် Google Ads ကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အသက်သာဆုံး (အခမဲ့) နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုပ်ထွေးပြီးအချိန်ကုန်သောအရာတစ်ခုခုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။ AdWords ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပင်ပျော်စရာရှာနိုင်သည်။ လေ့လာမှုများပြုလုပ်စဉ်အတွင်း ROI (ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါ) နှင့်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာများ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်သင်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏အေဂျင်စီ Clever Ads Google Ads ၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် Clever Ads နှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲသိပါသည်
မည်သည့်အရွယ်အစားနှင့်ဘတ်ဂျက်မဆိုမည်သည့်အေဂျင်စီကိုမဆိုဂူဂဲလ်၏ကြော်ငြာကိုရယူသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာဖွေမှုရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသည့်ပိုမိုကြီးမားသောအတွေ့အကြုံရှိသည့်အေဂျင်စီများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့်အေဂျင်စီများအတွက် Google Ads ဘတ်ဂျက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုသင်အသုံးပြုလိုသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ သင်၏ဖောက်သည်များ၏ Google Ads စည်းရုံးမှုများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုရှိသည်ဟုယုံမှားသံသယဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီသည်အမှန်တကယ်အများဆုံးလုပ်ဆောင်မှုရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကပေးဆပ်မှုရှိမရှိသိချင်လား။ Clever Ads AdWords သည်သင်၏ကိရိယာတန်ဆာပလာများဖြစ်သည်။
cleverads ၊ assistant @ cleverads .com တွင်သင်လိုအပ်သောမည်သည့်မေးခွန်းများ၊ မည်သည့်စိုးရိမ်မှုများ၊ အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မည်သည့်အကူအညီအတွက်မဆိုသူတို့ကိုသင်အမြဲဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင်နှင့်သင်၏အေဂျင်စီလိုအပ်သမျှ
Tools များ၏ဘက်ပေါင်းစုံ Suite
Clever Ads အေဂျင်စီများအတွက် AdWords ကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း၏နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ Clever Ads control panel မှအရာအားလုံးကိုရယူနိုင်သည်။ သင်က Google Ads Clever Ads မှစီမံပေးသောစီမံခန့်ခွဲမှုလွယ်ကူမှုနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာများ၊ သတိပေးချက်များ၊ အကြံပေးချက်များ Google Ads ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ ဂူဂဲလ်၏ algorithms အသစ်များ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတိုးချဲ့မှုများနှင့်အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ သော့ချက်စာလုံးစိတ်ကူးများကိုအခြားအင်္ဂါရပ်များအကြားညှိရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ All-in-one အထူး Google Ads သည်သင်၏အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း - သင်၏စီးပွားရေးကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင့်ဖောက်သည်များအားပျော်ရွှင်စေရန်အချိန်ဖြုန်းနေစဉ်ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးအဘို့အရေးအဖွဲ့-based apps များ
ပေါင်းစည်း Google Ads မှ Slack , Microsoft Teams , ဒါမှမဟုတ် Google Chat
သင်၏မက်ထရစ်သတိပေးချက်များကိုတစ်ကြိမ် (သို့) အပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာများကို chat မှတစ်ဆင့် chat မှတစ်ဆင့်သင့် client ၏ account စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်ဆိုင်သောဂရပ်များနှင့်မက်ထရစ်ကိုလက်ခံရန်ပြင်ဆင်ပါ။ Google AdWords သည်ဤကဲ့သို့သောချက်တင်စကားပြောခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
သင်၏ Google Ads အလိုအလျောက်အခမဲ့ဖန်တီးထားပါ။
Clever Google Ads Audit ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှနောက်ဆုံးနှုတ်ထွက်မှုကိုရယူပြီးသင်၏ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့နည်းစေရန်။
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှကန့်သတ်မသတ်မှတ်ပါနဲ့။ သင်အလိုရှိဘယ်နေရာမှာမဆို Advertise! ဘာသာစကားမျိုးစုံသို့အရာအားလုံးကို Translate ။
သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကို Filter နှင့်သင့်လှုပ်ရှားမှုများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိ။
ပိုသော Clever Ads
သင်သည်သင်၏ client များ '' ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်ကိရိယာများ။
Clever Ads သည် cookies ကဲ့သို့သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်၊ အကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာများကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူရန်အောက်တွင်နှိပ်ပါ - စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့သည်သင်တို့၏ privacy ကိုလေးစားပါတယ်။
Clever Ads ဘလော့
Clever Ads သည်ဂုဏ်ယူသည့် Premier Google Partners ဖြစ်သည်
2021 - Clever Ads ကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ပြုလုပ်သည်